भोलि त नयाँ वर्ष रे !
byShyam Rana magar - December 31, 2020
गाउँमा हुँदा अँग्रेजी नयाँ वर्ष आएको पत्तो हुन्थेन । नेपाली नयाँ वर्ष बरु आएको प्रकृतिले नै थाहा दिन्थ्यो । रित्तो भएर बसेका रुखहरुमा नयाँ पालुवा भरिन्थे । खेतबारीमा नयाँ बालि लगाउने बेला हुन्थ्यो । घरमा नयाँ पात्रो फेरिन्थ्यो । स्कुलमा नयाँ क्लास चढिन्थ्यो । र, पो नयाँ वर्ष नयाँ जस्तै हुन्थ्यो ।
आजभोलि त्यही नयाँ वर्ष कतिबेला आयो ? कतिबेला गयो ?
पत्तै हुन्न ।
सहर आएदेखि अँग्रेजी नयाँ वर्ष चाल पाउन थाले । अँग्रेजी नयाँ वर्षमा राम्रै रौनक छाउछ बजारमा । लेकसाइड यही छेकोमा गुलजार बन्छ । खैर, यो वर्ष समय उस्तै रहेन । जे होस्, अँग्रेजी नयाँ वर्षको भेउ मैले यतै आएर पाएँ ।
सन् २०२० धेरै त दुख्ने वर्ष बन्यो । मेरो लागि मात्रै होइन । सारा विश्वकै लागि त्रासद बन्यो, २०२० । तर, २०२० जे जस्तै रहे पनि एउटा निकै राम्रो कामको सुरुआत भएको छ । २०२० मा गर्व गर्न लायक एउटै काम भयो, शुन्य संसार ब्लगको सुरुआत ।
शुन्य संसार डटकमसँग धेरै लामो यात्रा गर्ने सोचाइ छ । त्यसै अनुसारको दुर दृश्टि पनि । पत्रकारिता हुँदै ब्लगकारितामा छिरेको छु । ब्लग सुरु भएको एक महिना पाएको यति धेरै मायाले मलाई खुबै हौस्याएको छ । दिनहूँ नयाँ नयाँ शिर्षकमा ब्लग लेख्ने जोश पनि भरेको छ ।
केही समय शुन्य संसार खालि रह्यो । म आफ्नै व्यक्तिगत समस्यामा भुले । नयाँ वर्षमा बाचा गर्छु । अब, शुन्य संसार कहिल्यै शुन्य हुने छैन । केही न केही विषयबस्तु लिएर उपस्थिति जनाई रहेको हुनेछु ।
पात्रो मात्रै होइन । नयाँ वर्षमा हर दिन नयाँ बनोस् । उमंगमय बनोस् । तपाइँहरु सब्बैलाई धेरै शुभकामना ।